समाज Archives - Page2of 11 - Bagaicha.com
बालीनाली सखाप पार्ने फट्यांग्रा जातका कीरा सलह कपिलवस्तुमा पनि करोडौ संख्याको झुन्डमा भित्रिएका छन् । भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला हुँदै जिल्ला भित्रिएका हुन । लुम्बिनीदेखि पश्चिम कपिलवस्तुका लवनीदेखि सदरमुकाम तौलिहावा तथा शिवराज नगरपालिकासम्म करोडोै संख्यामा रहेको सलहको झुन्ड दिउँसो चारबजेतिर कपिलवस्तु भित्रिएका हुन । सलह भित्रिएपछि किसानहरु आतंकित भएका छन । शुक्रबार भारतका बिभिन्न स्थानबाट नेपालका...
भारतीय सीमा क्षेत्रबाट रुपन्देही हुँदै भित्रिएका सलह पाल्पामा बास बसेका छन् । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीमा शनिबार दिउँसो देखिएका सलह किरा पाल्पामा रोकिएका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालले सलहका विभिन्न झुण्ड पाल्पामा बास बसेको बताए । ‘आज दिउँसोसम्म दोभानमा मात्र सीमित थियो । मदनपोखरा तथा सराई हुँदै हुल टुक्रा टुक्रा भएर आएको हुनुपर्छ । यो ठूलो संख्यामा हुनसक...
दुर्गा गुरुङ्द्धारा खोप केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग ।
१२ असार काठमाडौ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका वाउसेस्थित निर्माणाधिन सामुदायिक खोप केन्द्रलाई दुर्गा गुरुङले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । हङकङलाई कर्मथलो बनाएर आईरहेको गुरुङले खोप केन्द्रलाई रु. १ लाख एक हजार दुई सय सहयोग गर्नु भएको हो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, समाजसेवीहरुको रोहवरमा समाजसेवी गुरुङसहित मिलन फाउण्डेसन नेपालमार्फत प्रदान गरिएको सहयोग रकम निर्माण...
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न पोखरामा अवरोध, आठ राउन्ड हवाई फायर……
कोरोना भाइरस संक्रमणले स्याङजाका एकजना पुरुषको बुधबार राती पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मृत्यु भयो। आँधीखोला गाउँपालिका–१ सिरुवारीका ५५ वर्षिय ती पुरुषको मृत्य भएपछि शव व्यवस्थापनमा भने झन्झट आइपर्योा। शव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा स्थानीयको अवरोधले केही समय लागेको थियो। स्थानीयवासीको अवरोधका बाबजुत पनि पोखरा महानगरपालिका–३२ को मजुवामा सेतीनदी किनारमा श...
रुकुम पश्चिम घटना : वडाध्यक्षसहित २३ जनालाई थुनामा राख्न आदेश……
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ । बुधबार जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । साथै तीनजनालाई साधारण तारेख र एकजनालाई धरौटीमा छाड्नसमेत आदेश दिएको छ । चौरजहारी नगरपालिका–८, का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने...
सडकमा ग्राभेल खसाल्ने कामलाई रोक्न गएका नगर प्रहरी कुटिए……
शहरी विकास मन्त्रालयबाट आएको बजेटबाट गुपचुप तरिकाले भैरहेको सिमरा–मलाही सडकमा ग्राभेल खसाल्ने कामको बारेमा बुझ्न गएको महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई बुधबार कुटपिट गरिएको छ। कुटपिटबाट नगर प्रहरी नमिता कुशवाह लगायत घाईले भएका छन्। धारिलो हतियारबाट प्रहार गरिएको कुशवाहाको टाउकोमा चारवटा टाँका लागेको कलैया अस्पतालले जनाएको छ। ‘नगरप्रहरीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ,’ कलैया अस्पतालका डाक्टर रबी रो...
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्यो……
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेको छ। मंगलबार ५३८ नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ पुगेको छ। अहिलेसम्म २ हजार २ सय २४ जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा ७६ जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण थप एक जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार दैलेख, दुल्लुका ४५ वर्षिय पुरुषको असार ८ गते बेलुका ...
सोमबार एकैदिन ३ सय ७० जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन् । निको भएका उनीहरु देशभरिका बिभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । निको हुनेमा ३२ जना महिला र ३ सय ३८ जना पुरुष रहेका छन् । सोमबार निको भएकासहित निको हुनेको संख्या २ हजार १ सय ४२ जना पुगेका छन् । ती मध्येमा १ सय ६१ महिला र १९ सय ६१ पुरुष छन् । एकैपटक धेरै जना डिस्चार्ज भएको पहिलो पटक रहेको यस अघिका तथ्यांकले औल्याएका छन् । निको हुनेहरुमा द...
देशभर फैलियो मनसुन, काठमाडौंसहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा बाढीको जोखिम……
जुन १२ मा प्रवेश गरेको मनसुन अहिले देशभर सक्रिय भएकाले मौसमी गतिविधि बढ्ने भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ । महाशाखाले आइतबार साँझ जारी गरेको विशेष बुलेटिनमा भनिएको छ– सामान्यतया मनसुन जुन १० मा नेपालको पूर्वी भू–भागमा प्रवेश गर्छ । यस वर्ष मनसुन जुन १२ मा नेपालको पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको थियो। आज (आइतबार) जुन २१ देखि देशैभर मनसुनको प्रभाव परेको छ। यससँगै मौसमी गत...
भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएकालाई गाउँगाउँमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखियो। केही दिनपछि आरडिटीरिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्र होइन, पोजेटिभ आएकालाई समेत संकलित नमुनाको पिसिआर रिपोट नआउँदै घर पठाइयो। त्यस्ता नमुनाको रिपोर्टमा संक्रमणको पुष्टिभएपछि सुदूरपश्चिमका कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरालगायत विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँपुगेर समुदायमा घुलमिल भएका संक्रमितखोज्न भ्याइनभ्याई भएको छ। ‘५८ जनाको पिसिआर जाँचका लागि...
बागमती प्रदेश : थुप्रिदै स्वाब, सुस्त पीसिआर परीक्षण……
बागमती प्रदेश अन्र्तगत कोरोना संक्रमित सबैभन्दा बढी देखिएको धादिङ जिल्लामा अहिले थ्रोट स्वाब संकलन कार्य धमाधम भइरहेको छ । यसरी भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वाब संकलन गरि पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि पीसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन सकेको छैन । ‘स्वाब संकलन गरि पीसिआर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठायौँ तर रिपोर्ट ढिला आउँछ’, नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विष्णु रिजालले भने, ‘पीसिआर रिपोर्...
गत वर्ष रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा रनिङ शिल्ड थियो। जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका १९ वर्षीय नवराज विक पनि उक्त प्रतियोगितामा सहभागी थिए। त्यतिबेला चौरजहारी नगरपालिका–८ की सुष्मा मल्लसँग प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। प्रेम सम्बन्धमा सुरु भएपछि उनीहरू बीच विभिन्न समस्या आउन सुरु भए। कारण थियो जातीय भिन्नता। प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको वर्ष दिनपछि दुवैले विवाह गर्ने सहमति भयो। केटा–केटीबीच...